LOVE ISLAND 2018: MEGAN BARTON-HANSON ၏အမြန်ဆုံးဓာတ်ပုံများ - သတင်း
ယခုသင်ပူနေသည်ဟုထင်လျှင် Love Island ၏စပ်ပြီးစပ်ဓာတ်ပုံများမှ Megan ကိုမတွေ့မှီတိုင်အောင်စောင့်ပါ
တကယ်တော့ Love Island ရဲ့ Megan ဟာဒီနှစ်ပြိုင်ပွဲမှာအကြီးအကျယ်ကြမ်းတမ်းတဲ့အချိန်တွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတာပါပဲ။ အမုန်းတရားများစွာလွှင့်တင်ခဲ့သည် သူမ Insta အပေါ်သူမ၏မှတ်ချက်အပိုင်းကိုပိတ်ထားသည် - ငါတို့မနာလို fuck ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုသူမကဲ့သို့မထိုက်မတန်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျော်မရနိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
သူမအားလုံးကိုမြင်တွေ့ပြီးပြီ သူမ၏ပလပ်စတစ်ခွဲစိတ်မှုမတိုင်မီယခင်ဓာတ်ပုံများ , ထောက်ပံ့ရေးဆရာထံမှအကြွင်းမဲ့အာဏာ bombshell မှသူမ၏အောက်ပါ။ သူမကပေးတဲ့ Kylie အထုပ်အတွက်ငါတို့ပိုက်ဆံပေးချင်တယ်၊ ပြီးတော့သူမရဲ့ဆေးခန်းကိုသွားနိုင်အောင်ဘယ်တော့မှမသွားဘူး။ သူလိုချင်တာတွေကိုသိပြီးသားခွဲစိတ်ဆရာ ၀ န်တစ်ယောက်ကသူဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုသူ့ကိုပြောပြတယ်။ အကယ်၍ သင်ပေါင် ၂၅ ပေါင်သက်သာမယ်ဆိုရင်ဘယ်မှာသုံးရမယ်ဆိုတာသင်သိတယ်။
ငါလုံလောက်လောက်သည်ဟုဆိုသည်။ ကျနော်တို့ဒီမှာအချို့သောကောင်မလေးတစ်ယောက်ထောက်ခံမှုလိုအပ်ပါတယ်။ သူမအပေါ်မည်သူမှတ်ချက်ပေးမည်နည်း သူမတရားဝင်တယ်လီဖုန်းပေါ်မှာငါတို့အားလုံးအတွက်တက်လာပြီးလက်ဖက်ရည်အနည်းငယ်ကျွေးလိုက်တဲ့အခါ ငါတို့ကအရမ်းကိုကျေးဇူးတင်သင့်တယ်။ သူမကငါတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုအောင်မြင်မှုရဲ့သော့ချက်ပဲ ကြိုးစားကြည့်ပါ ငါ့ကိုသူမပြောတာမဟုတ်ဘူး သူမအပြုံးနှင့်သူမ၏ Bum ကသူမကို 10 စိုင်ပိုင်းဖြစ်စေသည်။ သူမသည်ရေကူးဝတ်စုံများနှင့် corsets တွင် ပို၍ ပင်ကြည့်နိုင်သည်။
ငါတို့ megs တွေအားလုံးကိုတောင်းထဲထည့်ချင်တယ်၊ ဒါကြောင့်သင်ရေငတ်တော့မယ် AF ကြောင့်ရေအချို့ကိုဖမ်းယူပါ။
@gavinglave x @ ခြောက်ဆယ် ၆ မာမာပြissueနာ ၃ MUA @cristinapilo @tropicana_ibiza
မျှဝေသည် Megan Barton-Hanson 10:28 pm တွင် PDT မှာAprပြီ 16, 2018 ရက်တွင် (@meganbartonhanson_)
❤️❤️❤️ | ဝင်း #outtake ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်
မျှဝေသည် 'Win 9:12 pm တွင် PDT မှာမေလ 6, 2018 ရက်တွင် (@darkhorsevinn)
?? @mikaylajanexx @meganbartonhanson X @thaimatic # sixty6mag # issue3 #ibiza #blackandwhitephoto #soulsisters #bandw
မျှဝေသည် ခြောက်ဆယ်မဂ္ဂဇင်း 12:01 pm တွင် PST မှာဇန်နဝါရီလ 28, 2018 ရက်တွင် (sixty6mag @)
နှင့်အတူနှစ်ဆကိုမြင်လျှင် #meganbartonhanson x @milianeyes #ThrowbackThursday # sixty6mag # ပြ1နာ1 #vooty # ဝတ်လစ်စလစ် #uncensored #မက်မွန်သီး #mirror #france pic.twitter.com/JmWmmcVn7o
- SIXTY6 မဂ္ဂဇင်း (@ Sixty6Mag) ဇူလိုင်လ 12, 2018
@meganbartonhanson_ #bootysquats #booty #bootyappreciation # like4like #photoshoot #gorgeous #gorgeousblonde #stunner #bodyappreciation #bodygoals #loveisland #hot_babe_united #topmodel #internationalmodel # သဘာဝ> # ဂုဏ်ပြု # အလှအပ # အလှအပ # အလှအပ # အလှအပ # ရုပ်ပြ အနုပညာရှင်
မျှဝေသည် Glenn Wallace 3:57 pm တွင် PDT မှာဇွန် 28, 2018 ရက်တွင် (@creative_instincts)
Blondie - သင့်အတွက် gfx-heads မတိုင်မှီနှင့်ပြီးနောက်ပါဝင်သည်။ @meganbartonhanson
မျှဝေသည် James Zwadlo 10:13 pm တွင် PST မှာနိုဝင်ဘာ 9, 2017 ရက်တွင် (@jzwadlo)
'မလှုပ်မလှုပ်မလှုပ်မနေပါနဲ့' Mr Jetson '?? @meganbartonhanson @partylikejzl #spacebabe # sixty6mag #martini မှရိုက်သည်။
ရာသီ6စေမယ့် get ဆီးရီးယားနဲ့အစ်စပေါ်လာ
မျှဝေသည် ခြောက်ဆယ်မဂ္ဂဇင်း 2:00 pm တွင် PST မှာဇန်နဝါရီလ 5, 2018 ရက်တွင် (sixty6mag @)
ပြီးပြည့်စုံသောဟန်ဆောင်သူများ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်အစစ်အမှန်မဟုတ်သောအရာအတွက်ဒေါက်ဖိနပ်ကိုကျော်။ ကျနေသလား။
မျှဝေသည် Megan Barton-Hanson 3:38 pm တွင် PDT မှာAprပြီ 17, 2018 ရက်တွင် (@meganbartonhanson_)
သားရေ luvvin ရယူနေခြင်း ' #meganbartonhanson x @JZL_style
Instagram ပေါ် ghostlightcreations အားဖြင့်ဂျာကင်အင်္ကျီ # sixty6mag # Issue2 #သားရေ #သားရေဂျာကင်အင်္ကျီ #sundaybumday #badass pic.twitter.com/qh6RkHN3ri
- SIXTY6 မဂ္ဂဇင်း (@ Sixty6Mag) ဇွန်လ 24, 2018
အထိမ်းအမှတနှင့်ဂီတ #ftmedd #ftwotw #igPodium_portraits #artofvisuals #lookslikefilm #nikon_photos #moodygrams #agameofportraits #portrait_shots #rsa_portraits #jj_humanedge #featuremeofh #jj_allportraits #portraitpage #folkportraits #makeportraits #liveauthentic #portraitmood #majestic_people #pursuitofportraits #meganbartonhanson #postmypicsticks #manchesterphotographer # meganloveisland #loveisland
မျှဝေသည် ဓာတ်ပုံဆရာမန်ချက်စတာလား 4:45 pm တွင် PDT မှာဇူလိုင်လ 4, 2018 ရက်တွင် (@patryk_kott)
အတူအိပ်ရန်အဆင်သင့်ပါပဲ #meganbartonhanson ??
နေဖြင့်ရိုက် @matthewcomer ပြissueနာ4အတွက်! # sixty6mag # ပြ4နာ4 # ဝတ်လစ်စလစ် #blackandwhite pic.twitter.com/mCrNkFXlKC
- SIXTY6 မဂ္ဂဇင်း (@ Sixty6Mag) ဒီဇင်ဘာလ 12, 2017
@meganbartonhanson မော်ကွန်းတိုက်မှ ထပ်မံ၍ ထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသောရိုက်ချက်များ
မျှဝေသည် James Zwadlo 1:42 pm တွင် PDT မှာသြဂုတ်လ 29, 2017 ရက်တွင် (@jzwadlo)
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Megan Throwback မှလှပသောအဆုံး! @meganbartonhanson_ x @ohrangutang ။ - ပြIssueနာ ၃ # လှည့်ပြန်သွားခြင်း။ ပုံနှိပ်နှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ် ၀ ယ်ယူမှုများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဇီဝဆက်သွယ်မှုမှတစ်ဆင့်ရရှိနိုင်သည် - # sixty6mag # issue3 #meganbartonhanson #ohrangutang #ibiza #summer #swimsuitseason #swimsuit #nude #glamour
2 *2+2*2+ 2-2 * 2
မျှဝေသည် ခြောက်ဆယ်မဂ္ဂဇင်း 2:00 pm တွင် PDT မှာမေလ 3, 2018 ရက် (@ sixty6mag @)
ဟယ်လိုဝင်း @meganbartonhanson #Jzl #mickeyears #halloweencostume #babesofinstagram ကဲ့သို့ခံစားရခြင်း
မျှဝေသည် ဂျိမ်းစ် Thompson က -JZL- 6:07 pm တွင် PDT မှာအောက်တိုဘာလ 29, 2017 ရက်တွင် (@partylikejzl)
ဘာဘရီ[အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]X @partylikejzl ဆောင်းပါး ၄ # ခြောက်ဆယ် ၆ မာဂိတ် # ခြောက်ဆယ် ၆ မော်ဒယ်လ် # ခြောက်ဆယ် ၆ မိမိကိုယ်ကို # ပြ4နာ4 #lasvegas #jlz #covergirl #champagne #incincity #poolside #barbie #badbarbie
မျှဝေသည် ခြောက်ဆယ်မဂ္ဂဇင်း 12:01 pm တွင် PST မှာမတ်လ 4, 2018 ရက်တွင် (sixty6mag @)
@meganbartonhanson ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းဖြင့် @partylikejzl ဘို့ @ sixty6mag သင့်မှာမိတ္တူရှိပါသလား ရရှိနိုင်ပါသည် https://t.co/Td0vyvWrQu pic.twitter.com/lC5p0lGl70
- SIXTY6 မဂ္ဂဇင်း (@ Sixty6Mag) ဖေဖော်ဝါရီလ 2, 2017
ယခုရာသီဥတုအတွက်တစ်ခုတည်းသောတိကျသောအဝတ်အစား meganloveisland #meganbartonhanson #postmypicsticks #manchesterphotographer #loveisland #adoberisingstars
hollister ဂျင်းဘောင်းဘီကြီးတွေသို့မဟုတ်သေးငယ်တဲ့ run ပါဘူး
မျှဝေသည် ဓာတ်ပုံဆရာမန်ချက်စတာလား 10:02 pm တွင် PDT မှာဇွန်လ 29, 2018 ရက်တွင် (@patryk_kott)
မော်ဒယ်: @meganbartonhanson_ #model #fashion #fashionphotography #vsco #vscofilm #thecoolmagazine #theimaged #artofvisuals #meistershots #portraitpage # theportraitpr0ject #quietthechaos #indiemagazine #resuermagazine #wearethepeople_magazine # pointortapragg #magsand #groupsprn @gsrgsg #m; #rebelandco #portraitmood #london
မျှဝေသည် EcheverryImages (@echeverryimages) ဇွန် ၁၀ ရက်၊
မျှဝေသည် Megan Barton-Hanson 12:19 pm တွင် PDT မှာဇွန်လ 6, 2018 ရက်တွင် (@meganbartonhanson_)
ကျနော်တို့ကတနင်္ဂနွေရဲ့ coz ရုံမထွက်ပါဘူး! @ ခြောက်လ ၆၆ မိနစ်ကုန်းပေါ်သို့ပြIssueနာ ၃ အတွက် @ochiuk မှ @meganbartonhanson !!! # sixty6mag # group1
မျှဝေသည် ခြောက်ဆယ်မဂ္ဂဇင်း 1:25 pm တွင် PDT မှာAprပြီ 29, 2017 ရက်တွင် (sixty6mag @)
နောက်ဆုံးတွင် @meganbartonhanson ဖြင့်ကျွန်ုပ်၏နောက်ဆုံးရိုက်ချက်မှဓာတ်ပုံများကိုနောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်းပြီးဆုံးသွားသည်။ it ကျွန်ုပ်အလွန်ပျော်ရပြီးသူမလည်းလုပ်ခဲ့သည်ဟုထင်သည်။ (သူမရယ်ကအကြိမ်ကြိမ်ရယ်မောခဲ့ခြင်းသာဖြစ်သည်ဟုသက်သေပြနိုင်သလား။ ) ကျွန်ုပ်အား၎င်းတို့အားအများစု / အများစုတင်ရန်တင်ချင်ပါသလား။ ငါ့ blog လား ငါသိပါရေစ! #ftmedd #ftwotw #igPodium_portraits #artofvisuals #lookslikefilm #nikon_photos #moodygrams #agameofportraits #portrait_shots #rsa_portraits #jj_humanedge #featuremeofh #jj_allportraits #portrait_shots #lepetitvoyeursubmissions #portraitpage #folkportraits #makeportraits #liveauthentic #portraitmood #majestic_people #pursuitofportraits # 35mm #postmypicsticks #manchesterphotographer #bleachmyfilm #adoberisingstars
ဤသူသည်ငါ meme အကြောင်းပြောမယ့်အားလုံးပါပဲ
မျှဝေသည် ဓာတ်ပုံဆရာမန်ချက်စတာလား 12:52 pm တွင် PDT မှာမေလ 20, 2018 ရက်တွင် (@patryk_kott)
ပျော်ရွှင်ဖွယ်မွေးနေ့ပါ။ @meganbartonhanson! ကျမသောက်နေသောသူငယ်ချင်း၊ ရိုင်းသောကလေးနှင့်အမြဲတမ်း the @ sixty6mag @jzl_style @jzlart
မျှဝေသည် ဂျိမ်းစ် Thompson က -JZL- 9:25 pm တွင် PST မှာမတ်လ 6, 2018 ရက်တွင် (@partylikejzl)
၁) ကျွန်းသူကျွန်းသားများသည်စနေနေ့များ၌ ၄ င်းတို့၏တစ်နေ့တာအနားယူရာနေ့ရက်ကိုသာတွေ့ရှိရသည်
နှစ်) Love-Island တွင်ပါ ၀ င်ခဲ့သောမည်သည့်အဖွဲ့ ၀ င်သည် Instagram တွင်အများဆုံးနောက်လိုက်များရှိသနည်း။ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု
၃) ဤအချစ်သည်အချိန်ကာလတစ်နှစ်မှနှစ်နှစ်အတွင်း Love Island ၏ပုံစံဖြစ်သည်